सन्तुष्टिका लागि कुन समय उत्तम मानिन्छ ? – Lokpati.com
नेपाली काँग्रेस सरकार अपराध पक्राउ नेकपा मृत्यु नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड प्रचण्ड नेपाल प्रहरी केपी शर्मा ओली राशिफल प्रधानमन्त्री चितवन अमेरिका
सन्तुष्टिका लागि कुन समय उत्तम मानिन्छ ?
By लाेकपाटी न्यूज Last updated Nov 26, 2019
काठमाडौं। यौन सम्पर्क कुन समयमा गर्दा उपयुक्त हुन्छ ? यो सामान्य प्रश्न हो। यसको उत्तर पनि मानिसहरुले अत्ति सरल रुपमा दिन्छन्। जब चाहना हुन्छ, तब दुवै जनाको सहमतिमा सम्बन्ध राख्नुपर्दछ।
यो कुरा आम रुपमा मानिँदै आएको कुरा पनि हो। त, वैज्ञानिकहरुले चाहनाका बेला मात्र यौन सम्वन्ध राख्ने समयलाई सर्वोत्तम भनेका छैनन्। बिहान यौन सम्बन्ध राख्नाले स्वास्थमा निकै नै फाइदा पुग्ने तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
हेल्थ एण्ड फिटनेस कम्पनी फोर्जा सप्लीमेन्टको एक अध्ययनले बिहानको समयमा यौन सम्बन्ध राख्नाले तनाव कम हुने र दिनको सुरुवात पनि राम्रो हुने देखाएको छ। विशेष गरि बिहान साढे सात बजेको समय यौनका लागि उत्तम हुने अध्ययनले देखाएको छ।
अध्ययनमा सहभागी मानिसहरुले बिहानको समय यौन सम्बन्ध राख्नाले पुरै दिन मुड फ्रेश रहने बताए। यसको एक लोजिकल कारण भनेको बिहानको समयमा पुरुषको टेस्टोस्टेरोन लेभेल निकै उच्च रहन्छ। जसले गर्दा उक्त समय यौन सम्बन्ध राख्दा निकै जोशिलो र धेरै समय टिक्ने हुन्छ।
फोर्जा सप्लीमेन्ट रिसर्चमा मानिसको सर्केडियन रिदम (स्लीपरवेक साइकिल र उक्त समयको तपाईँको गतिविधि) लाई अवलोकन गर्न चाहन्थे। उनले १ हजार मानिसलाई समावेश गराएर यो अध्ययन गरेका थिए। उक्त अध्ययनबाट यो निष्कर्ष निकालिएका हो।
केयुकेएल आयोजना निर्देशनालय प्रमूख थापाको सन्देश